galmudugnews.com » Xagla-Toosiye: Hoggaamiyihii SSC ayaan ahaa, Walina Waan Ahay, Somaliland oo Dhanna Wasiir Baan u Noqday
Home » WARARKA » Xagla-Toosiye: Hoggaamiyihii SSC ayaan ahaa, Walina Waan Ahay, Somaliland oo Dhanna Wasiir Baan u Noqday Xagla-Toosiye: Hoggaamiyihii SSC ayaan ahaa, Walina Waan Ahay, Somaliland oo Dhanna Wasiir Baan u Noqday galmudug on
No Comment Views 16242Wasiirka dhawaan Madaxweynaha Somaliland u magacaabay Wasaaradda Dib-u-dejinta Saleebaan Ciise Axmed (Xagla-toosiye) oo hore u ahaa hoggaamiyaha Jabhaddii Somaliland dagaalka kula jirtay ee SSC, ayaa sheegay inuu ku qanacsan yahay xilka Wasiirnimo, isla markaana uu hore u ahaa hoggaankii SSC, haddana uu yahay, sidoo kalena Wasiir u yahay bulshada reer Somaliland oo dhan.
Wasiir Saleebaan-Xagla-toosiye, waxa uu sidaa ku sheegay Xaflad uu xilka Wasaaradda loo magacaabay kula wareegay oo maanta lagu qabtay guriga Hay’adda shaqaalaha dawladda ee magaalada Hargeysa, waxaanu sheegay inuu ku qanacsan yahay xilka Madaxweynaha Somaliland u magacaabay toddobaadkii hore.
“Waxaan ku bogaadinayaa Wasiirkii hore ee dib u dejinta ahna Wasiirka Cusub ee Warshadaha oo aan ku bogaadinayo sida sharafta leh ee uu xilka iigu wareejiyay.Waxaan isagana ugu hambalyeynayaa jagada cusub ee loo magacaabay oo aan waliba Illaahay uga baryayo maadaama oo ay tahay Wasaarad cusub inuu u fududeeyo.” ayuu yiri Wasiir Xagla-toosiye.
Waxaanu Saleebaan Xagla-toosiye intaa ku sii laray oo uu yiri; “Waxaan shaqaalaha wasaaradda dib u dejinta ka codsanayaa inay iila shaqeeyaan sidii ay ula shaqeeyeen Wasiirkii hore. Waxaan balan-qaadayaa inaan hawlaha wasaaradda ka soo bixi doono.”
Wasiirku waxa uu ku dooday inuu wali yahay hoggaamiyihii ururkii SSC, waxaanu yiri; “Anigu Hoggaamiyihii SSC ayaan ahaa, walina waan ahay. Wasiir Somaliland ah baan noqday, bulshada Somaliland oo dhan baan Wasiir u ahay. nabadooda, horumarkooda iyo midnimadoodana waan ka shaqeynayaa. Waxase aan u sheegayaa deegaammaddii aan ka imid iyo ehelkaygii inaan u maqnahay oo aan dedaal weyn u geli doono haddii ILAAHAY ka dhigo sidii nabadda loo xoojin lahaa, sidii horumarka looga shaqayn lahaa iyo sidii isbedel looga dhalin lahaa deegaamadaasi.”
“Bulshada deegaamadayda shalay Hoggaamiyahoodii baan ahaa maantana Hoggaamiyahoodii ayaan ahay. Tabashooyin badani way jiraan oo way soo gudbisteen dawladuna way balan qaaday inay fulinayso. Waanan ka shaqaynayaa tabashooyinkaasi iyo waxyaabahaasi ay soo gudbiyeen in la hirgeliyo.” ayuu yiri Wasiirka cusub ee Wasaaradda dib-u-dejinta Somaliland Saleebaan Ciise Axmed (Xagla-toosiye).
Munaasabad ka dhacday Xarunta Hay’adda Shaqaalaha dawladda oo ay goobjoog ka ahaayeen mas’uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yahiin Xildhibaano ka tirsan labada Gole, wasiirada Wasaaradaha Ganacsiga, gaashaandhiga, Boosaha iyo Isgaadhsiinta, Kalluumaysiga, Hawlaha Guud, Duulista iyo Hawada, Wasiir ku xigeenka Amniga ee wasaaradda arimaha Gudaha, Gudoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID Faysal Cali Waraabe iyo Taliyaha Ciidanka Asluubta Somaliland , Salaadiin, waxgarad iyo dadweyne faro badan.
Wasaaradda Dib u dejinta, Qaab dhismeedkeeda, iyo waajibaadka ay qarankan ugu xilsaaran tahay ka soo jeediyey Agaasimaha Guud ee wasaaradda dib u Dejinta Cali Biikolo, halka sidoo kalena uu wasiirka cusub ugu ballanqaaday isagoo ka wakiil ah shaqaalaha dawladda ay si daacadnimo ku dheehan tahay ula shaqayn doonaan.
Wasiirkii hore ee Wasaaradaasi Cabdirisaaq Cali Cismaan oo ka hadlay munaasabadaasi balaadhan ayaa sharaxaad ka bixiyey waxyaabahii ay wax ka qabteen mudadii uu joogay wasaaradda sida mashaariicdii lagu hagaajinayey bilicda caasimadda isla markaana sadex goobood lagaga raray dadweynahii deganaa lagana hirgelinayo mashaariic dan guud ah, halka sidoo kalena ugu yaraan 75 guri loo dhisay dad danyar ah oo ku sugan Magaalada Burco xarunta Gobolka Togdheer.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21142 hitsContact US - 19980 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 19514 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 16374 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 16186 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 14874 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 14335 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 14304 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 14004 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 13780 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 12866 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 12655 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 12609 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 12329 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 12067 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11958 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11681 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 11596 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11588 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11578 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11461 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 11309 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11253 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11246 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 11034 hits Home About